Myanmar Defence Weapons: ဒုံးလက်နက်များက စကားပြောလာမည်...။
ko P January 27, 2013 at 1:37 AM
စစ်ရေယာဉ်အမျိုးအစားတွေက ဘယ်လိုခွဲတာလဲ။ ဖရီးဂိတ်တို့ ကော်ဗတ်တို့။ ဘာတွေကွာတာလဲ။
ko P January 27, 2013 at 1:41 AM
ဖြစ်နိုင်ရင် စစ်ရေယာဉ်အမျိုးအစား တွေအကြောင်း ပို့စ်တင်ပါဦး အကိုရေ။ ဗဟုသုတရတာပေါ့
King William January 27, 2013 at 8:54 AM
တပ်မတော်(ရေ)မှာ ရေငုတ်သဘောင်္တွေရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလား ကိုMMရေ...ရခိုင်ဘက်မှာ ရှိတယ်တဲ့။
Pyae Phyo February 16, 2013 at 4:54 AM
ရေငုပ်သင်္ဘော ၇ စီးလောက်ရှိပါတယ် ရေတပ်သင်္ဘောကျင်းမှာလည်း နူကလီးယား ရေငုပ် သင်္ဘော(၃)စီး တည်ဆောက်နေပါတယ်
kyaw san January 27, 2013 at 9:34 PM
david January 28, 2013 at 1:45 AM
စတုတ္ထမြောက်က ကျန်စစ်သားပါ။ ၀ါသနာရှင်တွေရဲ့ စစ်သင်္ဘောပုံစံငယ်လေးတွေ တင်ကြရအောင်။
110561mma January 28, 2013 at 11:31 AM
Myanmar navy should consider buying some submarines(preferably not from China) & in the meantime they should increase anti submarine capability of the surface crafts. Submarine with it stealthily capacity can causealot of damage to surface warships as proven by Nazi U-boats during WWII.
Designer Kyawzaw January 29, 2013 at 7:43 AM
တရုတ်လိုမျိုး သင်္ဘောပစ်ဒုံးတွေဆောက်ပီးချထားလိုက်ဗျာ. အနားမလာရဲအောင် C-602 တွေတောင်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်
sanaythar January 30, 2013 at 11:57 PM
ကို mm ရေ၊ အရင်ကပိုစ့်တစ်ခုမှာ ၄၉၁ မှာ တပ်ထားတဲ့ဒုံးကို စီ ၈၀၂လို့ ဖေါ်ပြဖူးတယ်။ အခုပို့စ်မှာတော့ စီ၈၀၁အေ လို့ဖေါ်ပြတယ်။ ကိုအမ်အမ်အနေနဲ့လည်း ရနိုင်သလောက်ဓါတ်ပုံ၊ သတင်းလေးတွေက အခြေပြုသုံးသပ်ရတာဆိုတော့ အခက်အခဲရှိမှာပဲ။ အခု ၈၀၁ အေ ကကော။ သေချာပြီလား။ အနီးကပ်ဓါတ်ပုံတွေလည်း ရပြီဆိုတော့ ၈၀၁အေ က confirm လား၊ ခွဲရအောင် သွင်ပြင်လက္ခဏာလေးတွေကိုကြည့်ပြီး သုံးသပ်ပေးပါဦး၊ အတည်ပြုချက်လေးလည်း ပေးပါဦးဗျ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
heart rebel February 19, 2013 at 10:30 AM
ဖရီးဂိတ်ဆို တာblue sea မှာရေပေ့ါ်ရေအောက်ဝေဟင် စစ်ဆင်နိုင် စွမ်းရှိ သည်။ထိုးစစ်ဆင်နိုင် စွမ်း ရှိ သည်။corvette သည် frigate ထက်အရွယ်ကောလက်နက်ကော အနည်းငယ်သေးပါသည်။
Moe Htet Myint February 19, 2013 at 10:53 AM
တိုက်သင်္ဘောနဲ့ ဖျက်သင်္ဘောကို ဘယ်လိုခွဲခြား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြီး စစ်ဆင်ရေးတာဝန်/ လှုပ်ရှားစစ်ကစားမှုတွေက ဘယ်လိုကွာတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး ကိုMMရေ.. ကောဗတ်တွေကိုရော ဘယ်လိုစစ်ရေးတာဝန်တွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလေး အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပေးပါဗျာ...
အိပ်နေတာပဲကောင်းတယ် February 20, 2013 at 1:01 AM